ငြိမ်းချမ်းခြင်းတေးသံ (ပါဠိversion) | နတ္ထိ
« ဇော်ဂျီရဲ့ ရှိန်းဆာယာ (ပါဠိversion)
၁၃၈၁ခု မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ရက်နေ့မှာ သီချင်းတစ်ပုဒ် ပါဠိဘာသာပြန်ဖြစ်တယ်။
မြင့်မိုးအောင် ရေးဖွဲ့ပြီး နေနေနဲ့ ချန်းချန်းတို့ သီဆိုထားတဲ့ “ငြိမ်းချမ်းခြင်းတေးသံ”ပါ။
မြန်မာပြည်သူပြည်သား ကမ္ဘာပြည်သူပြည်သားအပေါင်း အတွင်းအပ အပူမီးအပေါင်းကို ငြှိမ်းသတ်နိုင်ကြပြီး ငြိမ်းချမ်းခြင်းတေးသံကို နားဆင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းရပါတယ်။
ဒီသီချင်းဟာ ပုဂံ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းတင်သွင်းတဲ့အခါ ပါဝင်ရတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်က အဖွင့်သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာမျိုးဆွေသန်းရဲ့ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်နဲ့အတူ ဒီလင့်ခ်မှာ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ် >>> https://www.facebook.com/DESIGN.MST/videos/1743865462358875/
ဓာတ်ပုံကိုတော့ အေဒီ ၁၂ရာစု ပုဂံ လောကထိပ်ပန်စေတီ ဗုဒ္ဓ၀င်ရှစ်ခန်း နံရံပန်းချီများမှ နာဠာဂီရိဆင်ကို အောင်တော်မူခန်းကို ရန်ကုန် Junction City နှလုံးသားထဲက ပုဂံ www.fb.com/MyanmarHeritageBagan/ ပြပွဲမှာ ပြသထားတုန်းက ရိုက်ကူးထားတာလေးပါ။ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းမုဒြာဟာ လောကကို ငြိမ်းအေးစေကြောင်း အမှတ်အသားကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ပါ။
နေနေနဲ့ ချန်းချန်းတို့ သီဆိုထားတဲ့ “ငြိမ်းချမ်းခြင်းတေးသံ”ပါ။
သုပိနာ ဇီဝန္တာ ပဗုဇ္ဈန္တာ
ဧကတော မယံ မာပေမ
၀ါတေ ပက္ခန္ဒန္တံ ၀ါယန္တံ ဂီတံ
ဟဒယေ သုတံ ဂီတံ
သမုပ္ပန္နံ ဣဒံ သာသနံ
ငြိမ်းချမ်းခြင်းတေးသံ (ဆို – နေနေ၊ ချန်းချန်း)
လေမှာ ပျံဝဲလွင့်နေ တေးသံ
နှလုံးသားထဲ ကြားနေတဲ့ တေးသံ
This entry was posted on April 17, 2019 at 3:08 pm and is filed under ဂီတ, စာကိုး, ပါဠိ, ပုံရိပ်, ဘာသာပြန်.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.